Ungayivimba kanjani imemori yakho ye-USB ekudluliseni amagciwane noma ngabe ithelelekile | Kusuka kuLinux
Ungayivimba kanjani imemori yakho ye-USB ekudluliseni amagciwane noma ngabe ithelelekile
Leli thiphu ngelohlobo oluvame kakhulu lwegciwane, yize kungezona zonke ezisebenza kanjena
Enye yezinto ezikhathaza kakhulu uma kuziwa ekusebenziseni induku yakho yememori ye-USB kuwo wonke amakhompyutha okwazi ukufinyelela kuwo (emsebenzini, esikoleni, ekhaya, njll.) Ukuthi uma ikhompyutha inegciwane, ngokushesha iya kwimemori yakho nakwimemori yakho kuwo wonke amanye amakhompyutha. Cishe kuqinisekile ukuthi uma ikhompyutha eyodwa endaweni yokusebenza inegciwane, bonke abanye banayo nayo noma bazoyithola kungekudala. Yebo, nali iqhinga lokuvimbela wonke amakhompyutha ukuthi angatheleleki, ngincoma ukuthi ukwenze, ngoba akubizi lutho futhi akunankinga.
Okokuqala, ukuxazulula inkinga kufanele wazi ukuthi inkinga isebenza kanjani. Lapho sifaka inkumbulo kwikhompyutha enegciwane (inqobo nje uma igciwane lolohlobo oludluliswa nge-USB; akuwona wonke amagciwane enza lokho), igciwane elikhona liyazikopisha kwimemori futhi lenze ifayela elibizwa nge-autorun.inf, okuyifayela lapho kubhalwe khona imiyalo yegciwane, okungukuthi, kulelo fayela kunedatha yegciwane elizokwakha, likopishwe, lihanjiswe ezinye izinkumbulo, njll. Konke lokhu ngaphandle kokudinga ukuthi umsebenzisi enze noma yini.
Kufanele kushiwo ukuthi igciwane nefayela elishiwoyo lifihliwe kumafolda (kwiWindows kunjalo, kunoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza olungenzeki), ngakho-ke azikwazi ukususwa ngesandla. Iphuzu lapha ukuthi ngaphandle kwalelo fayela igciwane alikwazi ukusebenza, ngakho-ke uma sikwazi ukuvimbela lelo fayela ukuthi lidalwe, sivimbela igciwane ukuthi lisebenze, ngakho-ke lenze okubi.
Ukuvikela ifayili ukuthi lingadalwa, kufanele "silishaye" leli gciwane, okusho ukuthi, sakha i- autorun.inf ngaphambi kokuthi igciwane liyidale. Ngalokhu, kufanele siqale sihlanze inkumbulo yethu yamagciwane, indlela elula ngukugcina idatha yethu nokuyifomatha. Uma sihlanzekile, sakha ifolda enegama elithi autorun.inf (yingakho kudingeka ukuthi uyihlanze kuqala, ngoba uma sifuna ukuyakha futhi ingahlanzekile, uhlelo luzositshela ukuthi selivele likhona ifayela elinalelo gama, okungukuthi, ifayela elidale igciwane). Kufanele kube yifolda hhayi ifayili, ngoba lapho igciwane lifuna ukudala ifayili elinegama elifanayo, ngoba liyifolda alikwazi ukulibhala ngaphezulu, obekungaba okuphambene uma ngabe kukhona ifayela.
Lapho ifolda ye-autorun.inf isidaliwe, igciwane ngeke likwazi ukudala ifayili eliqukethe imiyalo yokwenziwa kwalo, ngakho-ke, ngeke lilimaze.
Cabanga ngefolda oyakha njengekhondomu: igciwane lizoba kwimemori (Uma ufaka imemori kwikhompyutha enegciwane, ikhompyutha izokopisha igciwane, ukuyigwema kufanele uhlanze ikhompyutha), kepha ngeke ukwazi ukusebenzisa leli gciwane noma ulikopishele kumakhompiyutha lapho uxhuma khona inkumbulo, igciwane limane lingazi ukuthi kanjani ngoba alinayo imiyalo (khumbula ukuthi amagciwane awaphili, akusona isidalwa esifuna ukucekela phansi ikhompyutha yakho njengoba kwenzeka emakhathuni noma kumamuvi).
Futhi le yindlela esingazivikela ngayo izinkumbulo zethu namadivayisi aphathekayo (ngoba lolu hlelo lusebenza nge-SD, i-MMC, imemori stick, amadiski akhishwayo nawo wonke amadivayisi asebenza nge-usb).
Khumbula, into ebalulekile ukuletha ifolda ye-autorun.inf kuwo wonke amadivayisi akho, ukuthi yize lokhu kungalivimbeli igciwane ukuthi lidluliselwe enkumbulweni, lizokuvimbela ukuthi ulidlulise futhi ulisebenzise kuwo wonke amakhompyutha owafakayo idivayisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Ungayivimba kanjani imemori yakho ye-USB ekudluliseni amagciwane noma ngabe ithelelekile
Futhi lokho kusithinta kanjani noma kusisize kanjani abasebenzisi be-GNU / Linux?
Kuyisizotha ukuze kungadluliswa igciwane leWindows. U-Ergo, yize eyindatshana ethokozisayo, ngeke ngilusebenzise lolu lwazi. Angifuni ukuzwakala ngeTaliban, kepha uma ngithelele umuntu othile, bazofakwa isicelo sokusebenzisa iWindows Window
UWilliam Campos kusho
yingakho ngithi cha…. hehehehe
Phendula uWilliam Campos
UDaniel Phakathi kusho
Yebo, kuyezwakala njengalokho okushoyo futhi okungahloniphi. Ishwa lokuthi inhlonipho ebikhona eDesdeLinux isishintshile
Phendula uDaniel Phakathi
Yebo, ukwanda kwabafundi be-SinceLinux akuhlali kusho ukuthi kube ngcono ngokomphakathi wabalandeli bayo.
Ngisebenzisa futhi iWindows, futhi ngokujwayelekile, inkinga yokwenza lesi senzo ivela kuWindows XP futhi yehla ngoba leyo malware ibeka engozini izinto eziningi ezizwelayo zohlelo. Nge-Windows 7, imvamisa, iningi le-malware likhomba into eyodwa yohlelo, ngakho-ke kuvamile mata kusho inqubo, i-autorun iyasuswa, iMalwarebytes Anti Malware iyavulwa, bese udaba luxazululwa.
Uma kwenzeka ukuthi i-antivirus ingasebenzi, ungaya ku-exterminator ye-malware ebizwa nge-ComboFix, esebenza kahle uma i-Windows PC yakho itheleleke ngokuphelele futhi inezinto ezibonakalayo.
I-PS: Ngisebenzisa futhi iWindows Vista SP2, kepha okungenani kufanele ube nezinsimbi ezinhle njengeprosesa ye-Intel Core i3 ukuze isebenze kahle.
Ngakho-ke kungcono ubuyele kumawindi; angicabangi ukuthi ukucabanga kanjena kuhambisana nesoftware yamahhala ngaphambi kokuba isoftware MAHHALA futhi kusivumela ukuthi sisebenzise noma yini esiyifunayo.
I-Ender Efrain Fletcher Salas kusho
Kukhona isoftware yamahhala ngaphansi kweWindows (Firefox, Gimp,…). Ngabe ihlangana ngani nokusebenzisa amawindi njengoba esebenzisa kwisoftware yamahhala ...
Phendula ku-Ender Efrain Fletcher Salas
Ihlaya ukuthi likhululeke ngokuphelele, hhayi ukuthenga imoto ebhekwe ngomunye umuntu, bese ufaka i-Excellent Parts (isoftware yamahhala) kuyo futhi namanje awukhululekile. 😛 Lokho akulona ihlaya, noma kunjalo i-winbug izohlala inamagciwane, amaphutha neminyango yangemuva. : 3 kepha kuyintandokazi yomuntu siqu yokufuna ukuba ngamehlo. Isibonelo kimi ngiyisebenzisa kuphela ngezizathu ezi-2. 1- Umsebenzi wami (Injiniyela ezinhlelweni zamakhompiyutha) kepha noma kunjalo ngihlala ngincoma ukusetshenziswa kwe-GNU / Linux
kanye no-2- Ukuba yiGamer (i-inveterate gamer) edinga i-winbug ukuze ikwazi ukudlala imidlalo emisha kakhulu njenge-BF4 ne-DayZ SA, ngiyethemba lelo phuzu liyanyamalala ngenxa ye-VALVE ne-SteamOS yayo.
Ngakho-ke kuGrain: 3 GNU / Linux Kungcono ngiyayisebenzisa futhi ngikhathazeka kancane ngamaphutha engihlala ngilinde kuwo iWinBug noma iMecOS
(Futhi) sikufisela inhlanhla futhi uvikele i-winbug yakho kahle. : / leyo nto yephuka kalula. Imemori eyodwa nje efakwe kwi-USB yakho yanele ukukucekisa.
Ama-distros e-GNU / Linux athandwa kakhulu mahhala, ngakho-ke imvamisa sincike kuma-codec amahhala asebenzisa ubuchwepheshe bokuphathelene (H.264, AVC-HD), abashayeli abaphathelene (NVIDIA, ATI / AMD), isoftware yokuphathelene eyenzelwe i-POSIX (Steam, VMWare Workstation ...) nezinye ama-blobs enza i-mainboard yethu isebenze ngokufanele kwi-distro yethu esiyithandayo.
Uma ufuna ukukhululeka ngokweqiniso, kungcono usebenzise amabhodi amakhulu nge-100% Intel chipset, ama-distros ane-GNU / Linux-Libre kernel futhi aqinisekiswe yi-FSF, yivalelise ku-YouTube, Facebook nakwezinye izinsizakalo zokuphathelene bese usebenzisa lezo iqinisekiswe yi-FSF.
Ngakho-ke nge-PC yami ye-Debian ngigculiseke kakhulu.
Ngicabanga ukuthi kuhle ukwazi lolu hlobo lwento yize mina uqobo ngisebenzisa i-Linux kuyo yonke into. Ngeshwa, emsebenzini bangifaka kwikhompyutha yami ye-Windows. Ngicabanga ukuthi sonke sinamakhompyutha esingawaphathi noma sinabangani nomndeni abasebenzisa iWindows ngayo yonke into, yingakho ngabelane ngaleli thiphu, ukuze ngibe nelinye ithuluzi ku-arsenal.
Ngicabanga ukuthi njengabasebenzisi be-GNU / LInux sazi ngaphezu kwabasebenzisi abaningi banoma iyiphi enye i-OS, futhi lokho kusho ukuthi nokuba nolwazi lweWindows noma iMac.
U-Anuro Croador kusho
Iqiniso ukuthi, ngaphakathi kwendawo yami kuphela ngisebenzisa i-gnu / Linux, angazi omunye umuntu oyisebenzisa cishe kuphela, abangani kuphela engiye "ngabavangela" futhi ngokwengxenye kanye nabanye, cishe bonke basebenzisa iWindows futhi akasebenzisi nginikeze amandla nge-gnu / Linux, yingakho le ndatshana yinhle kakhulu, kusukela manje ngizothatha isincomo sokusebenzisa leyo folda ye-autorun.inf ngicabanga ukuthi isebenza nakuma-hard drive wangaphandle
Phendula u-Anuro Croador
Umnikelo omuhle! Abaningi bethu baphoqeleka ukusebenzisa iWindows emsebenzini.
Kuyiqiniso, ngizokubheka nge-usb yami ukugwema ukutheleleka emsebenzini ...
U-Eider J. Chaves C. kusho
Phendula u-Eider J. Chaves C.
Bengilokhu ngisebenzisa le ndlela iminyaka, ikakhulukazi ekolishi.
Okushodayo okuthunyelwe bekungukuchaza ukuthi kungani ifayela le-autorun.inf libaluleke kangaka, okuyilapho imiyalo yokuthi i-PC (ene-Windows) kufanele yenzeni lapho kufakwa leyo pendrive ethile.
Ngaphezu kokuphawula kukaFrancisco, ngicabanga ukuthi uma kubalulekile njengoba kungebona bonke abantu obaziyo abasebenzisa ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux, ngisebenzisa i-lubuntu ne-archlinux kepha abazali bami nabangane basebenzisa iWindows, futhi ngidlulisa imininingwane eminingi emishini yabo ngokusebenzisa shayela peni.
Ngokuvamile okuqukethwe yile ndatshana kulungile, noma ngingathanda ukukuqedela kancane;).
Isilinganiso osiphakamisayo sincane ... siyavilapha, ngomqondo wokuthi akusizi ngalutho ukuba nefolda enalelo gama kwimemori uma umuntu obhale leli gciwane ehlakaniphile. Okwabo ukuthi uma uzokwakha lelo fayela ukuze usakaze igciwane lakho, qala ususe lelo elingaba khona (noma ngabe liyifolda noma cha) bese udala elakho.
Ngaphezu kwalokho, ngokwakha ifolda, ulahlekelwa ithuba lokubeka isithonjana ofuna ukusikhumbula (ifayela le-autorun.inf livumelekile ezintweni eziningi, kepha akufanelekile ukulichaza lapha) noma ukulinika igama nge-non- Izinhlamvu ze-ASCII ngokwesibonelo.
Mhlawumbe kungathandeka ngemuva kokudala ifayili lakho nokulimaka njengokufundwayo kuphela nohlelo (nge-cmd, "attrib + s + h autorun.inf"). Ngaleyo ndlela igciwane alikwazanga ukususa ifayili noma ukulibhala futhi ukwenziwa kube ngokwakho kuzogcinwa. Noma uma idrayivu isebenzisa i-NTFS isebenzisa ama-ACL ukukhawulela ukufinyelela kulelo fayela.
Kunoma ikuphi, amagciwane alolu hlobo akufanele adluliselwe ngale ndlela isikhathi eside. IMicrosoft isuse i-autorun ethule esevele ikhona kumsindo weVista engiyijwayele (ngo-2007? 2008?) Futhi kusukela ku-Windows 7 kuye phambili zonke izinhlobo zamadrayivu (ngaphandle kwama-CD, ama-DVD) zingasebenzisa kuphela okhiye be- "label" ne- "icon" be-autorun.inf, ngithanda lokhu ukuthi noma ngabe kucaciswe kangakanani ukuthi "vula" (lokho kwamagciwane) noma "igobolondo", ngeke zishaywe indiva.
Ukuphendula uFrancisco futhi, lokhu kungenzeka kungasisizi ngqo (ngaphandle kokuthi sisebenzise neWindows), noma kunjalo kungasiza kumngani noma ilunga lomndeni lethu elisebenzisa iWindows; noma kubhulogi ephathelene neLinux angiboni kabi kusabalalisa lezi zinto.
Bengimane ngicabanga ngalokho okushoyo esigabeni sesibili: igciwane kufanele lenzelwe ukubhala ngaphezulu nokuguqula amafayela nezinkomba.
Icebo lisebenza kuphela nge-linux, ngoba ngine-computer entsha ye-lenovo futhi endala yami igcwele amagciwane futhi ngixhume i-hard drive yami ukudlulisa amafayela wami abalulekile kepha amagciwane anamathela futhi ngacishe ngalahlekelwa yikhompyutha yami entsha, ngithanda ukwazi Ngingayifaka kanjani i-hard disk yami kwikhompyutha endala ukuze ngithole izinto zami ezibalulekile futhi uma ngidlulisela amagciwane kokusha kodwa angikatholi mpendulo ethile, pliss help me.
Lokhu kwenzelwa amawindi, akunjalo? njengoba ifayela le-autorun.inf liqukethe imininingwane emayelana ne-.exe okufanele yenziwe lapho kufakwa abezindaba (usb, dvd ...), ngabe lokhu kufanele kwesatshwe ku-linux?
Cha, kepha okungenani ukuba nokwehlukanisa ne-GNU / Linux kungakusiza ukuqeda lezi zinhlobo zamafayela wokumiswa kwe-autorun.
Ngisebenzisa kakhulu ukwahlukanisa kwami ​​kwe-GNU / Linux ezintweni eziningi, kepha kunoma yimuphi umsebenzi odinga isoftware kanye / noma izinto zokuphathelene ezingangivumeli ukuthi ngiziqhube ku-GNU / Linux, ngiya ekwahlukaneni kwami ​​neWindows. Kulula njengalokho.
Kuyathakazelisa ... yize ngingaboni ukuthi kungani ungatheleleli amanye amakhompyutha, lokho kusho ukuthatha imali kososayensi bamakhompyutha abaziphilisa ngokulungisa i-CPU ... ehehehehe uyadlala ... ngizozama.
Kwake kwenzeka kimi, kepha dala ifayela le-autorun.inf. ayisebenzi ngoba njengoba usho ukuthi igciwane liyabhala ngaphezulu.
Ngicabanga ukuthi lokhu kuyindlela enhle. 🙂
Kuhle kakhulu, kepha ngaphezu kwalokho, ungadala amanye amafayela amathathu abizwa nge-: "DRIVER, REYCLER, RESTORE". Kuyadingeka ukuthi bahlale ngaphandle kokunwetshwa futhi babashiye bevikelwe uhlelo kanye nefolda ye-AUTORUN.INF. Ngalokhu, ngixhuma izinkumbulo zami kunoma iyiphi i-PC futhi noma ngabe ithelelekile, akukho okwenzekayo kumadivayisi wami.
Kepha kungamafayela noma amafolda? futhi uma kungamafayela, akhiwa kuphi?
Lokhu kuyathakazelisa, ngiyabonga ngokwabelana ngolwazi.
UJorge m kusho
Yize okuthunyelwe kungasizi ku-linux, kuyakusindisa enkingeni yokususa ama-autorrunes nama-ex njalo lapho uya ku-cybercafe. Ngithole ubuqili lapho i-conficker igxuma ngemishini yami yokusebenza futhi bekungekho i-antivirus ezosebenza, ngoba isebenzise ukuba sengozini kwenethiwekhi kanye nama-pendrives. Njengoba kukhona ifolda, ayikopishelwanga kumhlahlandlela, futhi angikaze ngilibone noma yiliphi igciwane kamuva elilungise lelo "bug". Ngingeza ukufaka i-Prompt yomyalo bese ngifaka i-attrib + s + h autorun.inf ukufihla ifolda futhi ngiyenze ibe isistimu, ngenze kube nzima ngayo ukuthi isuswe.
Phendula ku-jorge m
Esikhathini esithile sokuphila, le thiphu izosiza. Jabulela
Angiboni amagciwane kumawindi 7 no-8 isikhathi eside, ngaphezu kwakho konke lokhu kusiza ukugcina i-xp ihlanzekile.
Imvamisa, le nkinga ivame kakhulu kubasebenzisi beWindows abangavamisile ukuthatha izinyathelo ezifanele lapho bebona ukuthi yiziphi izinqubo ezisebenza kuWindows PC okungeyona eyabo. Ku-Windows 7, njengoba besithuthukise kancane leso sici, ngoba manje ngokubulala kuphela inqubo ehlasela ama-USB, ngingaxazulula okwesikhashana inqubo ethelelanayo bese ngithola isikhathi sokulanda i-antivirus.
Ngokuqondene nabasebenzisi be-GNU / Linux, lo msebenzi ulula impela: ngo-nje dala ifayela le-bash futhi ngaleyo ndlela uxazulule leyo nkinga ecasulayo yokuthi kufanele uqede ngesandla, noma umane usebenzise umshini obonakalayo njengeseva yeClamAV futhi ngaleyo ndlela uphathe ama-heuistics we-antivirus yethu uma kungenzeka ube yi-paranoid engathembi i-antivirus ephathelene nayo.
Noma kunjalo, ku-Windows, umsebenzi wokuhlanza i-malware uvame ukuba yisidina, ngakho-ke ku-GNU / Linux kanye / noma amanye ama-OS afana ne-UNIX, lo msebenzi uvame ukuba lula kakhulu.
Sawubona. Ngicabanga ukuthi akekho umsebenzisi "ojwayelekile" osebenzisa iWindows obuka izinqubo uma kwenzeka ethola okuthile okungajwayelekile. Kungumsebenzi wabasebenzisi abaphambili noma ama-hobbyists ekhompyutha.
Futhi, akwaziwa ukuthi inqubo noma isevisi ngayinye yenzani kuWindows, ngaphandle kokunye esikwaziyo. Ngokwami ​​angithembi wonke umuntu futhi ngeshwa baningi!
Ingabe ikhona into efana nemiyalo ye- "man" ne- "whatis" ku-Windows?
Futhi kufanele ngithembeke, angibheki eduze izinqubo eziku-GNU / Linux noma.
Siyabonga ngokwabelana ngale ndatshana! Ngikuthola kuthakazelisa kakhulu.
Akukho kulokhu okusebenzayo
Benginephutha i-poico ilunge kakhulu: p
UGuillermo Valero kusho
Emhlabeni kunabantu abaningi ababakhathalelayo abanye, njengakule ndaba ye-BABEL ebhalwe ku- «FROM LINUX».
Kuwe, MSS DEVEL, ngikholwa ukuthi usuvele uvuna uthando oluhlwanyela esintwini. Sisekhona isikhathi - sakho sokulima umhlaba futhi ususe imbewu yamakhakhasi owahlwanyelayo bese uwashintshanisa ngenhlamvu kakolweni, irayisi noju, ukuze abantu abaseduze kwakho bakwazi ukwanelisa indlala yabo ngothando lukakolweni lokho kuhluma efeni lakho, ngoba uma uqhubeka kanjena, nalowo mcabango ufakwe ebhokisini ukuze kuzuze wena kuphela, lapho ihora lakho seliphelile, imizuzu yakho iphakeme futhi umzuzwana wokugcina wempilo yakho unyamalala, noma ngubani okuthola uzokwethula i- "I "egameni kanye no" U »Esigameni sokugcina segama noma igama ovela ngalo ekuqaleni kwamazwana.
Uma ukwenzele ukuncela iqhude, ukucasula nokudlala nomphakathi, ngicela izaba zakho futhi uNkulunkulu akubusise ngamahlaya akho amahle, ngikucele ukuthi iMSS DEVEL ikuthathe lokhu njengombhoshongo wamahlaya ami amahle. I-LOL.
Ngale ndlela ngishiya izinketho ezimbili zokuthi ukhethe eyodwa oyithanda kakhulu futhi ngithemba ukuthi ngelinye ilanga ngiyobona ibhulogi yakho, uma unayo noma unayo, ukubona ukuthi usho izinto ezithile uvuna abafowenu ukuthi thina bonke bangabantu.
NGIYABONGA KUSUKA KU-LUX
Phendula uGuillermo Valero
Ulwazi oluhle kakhulu! Kepha sikhona ngo-2018 futhi ngifisa ukwazi ukuthi igama legciwane selishintshile yini ... muva nje i-USB itheleleke ngeTrojan, anginankinga ngoba ngisebenzisa i-linux kodwa kubangani bami bekuyinkinga. Noma kunjalo, iphuzu ukuthi ngokusho kwami ​​igama legciwane lishintshile, futhi manje angazi ukuthi i-autorun.info igama okufanele ngilisebenzise ukudala le folda nokuvikela i-usb.
Ngibonile igama lefayela le- .info kodwa ngalisusa futhi angisalikhumbuli igama.
i-autorun.inf ayilona igciwane uqobo, kepha kunalokho imiyalo yefayela elinegciwane elizothatha isinyathelo. Namuhla noma yiluphi uhlelo lune-antivirus engakhomba izinsongo, noma ngabe lokho kuzohlala kungcono ukusebenzisa i-GNU / Linux 😉
I-MOC (umculo kukhonsoli)